Midabada la midka ah | Hal -abuureyaasha Online
Encarni Arcoya | 19/10/2021 21:21 | La cusbooneysiiyay 19/10/2021 21:24 | Waraaqaha midabaynta
Mid ka mid ah aqoonta ugu weyn ee ay tahay in qoraaga, hal-abuurka ama naqshadeeye uu ka ogaado midabka ayaa ah waxa loogu yeero midab analog ah. Kuwani waa qayb aad muhiim ugu ah la shaqaynta iyaga maadaama ay tahay inaad ka soocdo kuwa kale.
Laakiin waa maxay midabada isku midka ah? Waa maxay noocyada jira? Soo ogow, hoosta, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato iyaga oo ku jira tusahan aan kuu diyaarinnay.
1 Waa maxay midabada isku midka ah
2 Noocyada midabka ee la midka ah
2.1 Midabada koowaad
2.2 Midabada labaad
3 Isticmaalka midabada isku midka ah
Waa maxay midabada isku midka ah
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ogaato waa waxa aan ku tilmaameyno midabada isku midka ah. Laakiin, si aad tan u samayso, waa inaad fahanto waxa uu yahay giraangiraha midabka. Tan waxaa lagu qeexaa matalaadda garaafyada ee midabada lagu dalbanayo iyadoo lagu salaynayo midabkooda ama midabkooda. Si kale haddii loo dhigo, waa goobo ay midabada iyo codadkoodu si wada jir ah u matalayaan, iyaga oo isku ururinaya dhammaan guduudyada, jaalaha, cagaarka, buluugga ... dhexdeeda.
Sidan, waxaan ku fahmi karnaa midabada la midka ah sida kuwa isku dheelitiran oo aad isugu dhow. Ogow in "isbarbardhig" macnaheedu yahay wax la mid ah ama la xiriira. Sidaa darteed, kuwani waa kuwa ku dhow gudaha giraangiraha midabka.
Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad doorato midabyo la isku dari doono midba midka kale, maxaa yeelay runtii waxay wadaagaan hooska. Maxaadse ka helaysaa taas? Hagaag, waxaa jira qurxinta monochrome, halkaas oo codka ugu weyn uu ku badan yahay oo lagu daro kuwa kale oo la mid ah midabkaas aasaasiga ah.
Mid ka mid ah furayaasha wax yar ka yaqaaniin midabada isbarbar -taaga ah ayaa ah in midabka la qaatay, kan hore, loogu yeero ugu weyn oo midabada ugu dhow loo diyaarin doono midig iyo bidix. Taasi waa, ma qaadan kartid hal midab iyo labada xigta, laakiin waa inay noqotaa mid hore iyo mid gadaal ah.
Noocyada midabka ee la midka ah
Midabada la midka ah ayaa loo kala saari karaa laba qaybood oo balaaran: hoose iyo sare. Si kastaba ha noqotee, kuwa dambe dhexdooda, dhammaantood ma geli doonaan, laakiin qaar uun.
Midabada asaasiga ah waxaa loogu yeeraa maxaa yeelay waa hoosyo aan lagu helin isku darka laba midab ama ka badan. Si kale haddii loo dhigo, iyagu waa kuwa ugu saafi ah ama ugu asalka badan ee aan ka soo jeedin isku darka.
Oo maxay yihiin kuwaasi? Waa hagaag, waxay ku noqon karaan casaan, cagaar iyo buluug RGB, buluug, jaalle iyo magenta CMYK ama qaabkii caadiga ahaa, casaan, jaalle iyo buluug.
Maxaa loo tixgaliyaa midabada isbarbardhiga ah markaa? Xaaladdan, kuwa loo aqoonsaday inay yihiin waa: jaalle Buluug ah.
Dhinacooda, midabada labaad waa kuwa laga helay isku darka midabada aasaasiga ah. Kaliya marka la isku daro 2-3 midabada asaasiga ah ayaa la heli karaa midabo kala duwan laakiin kaliya marka isla xaddiga midabada la qaso ayaa loo tixgelin doonaa inay yihiin kuwa labaad (haddii kale sidaas ma ahaan doonto).
Xaaladdan, oranji, cagaar iyo guduud ayaa loo tixgeliyaa midabada labaad.
Isticmaalka midabada isku midka ah
Midabada la midka ah, sidaan hore u soo sheegnay, waa kuwa adeegsada cod isku mid ah dhammaantood, si marka marka la isku qurxiyo, ama loogu adeegsado naqshadda, waxay u oggolaadaan inay jiraan isku -dhafan hal -abuur leh. Tusaale ahaan, ka soo qaad inaad rabto inaad wax ku qurxiso codadka gaduudan adigoo adeegsanaya isbarbardhigyadiisa. Natiijadu waxay tahay in wax walba ay ku jiri doonaan codadkaas, laakiin kan ugu weyn ayaa ka badan kuwa kalena waxay siiyaan taabashada kala -duwanaanshaha ay u baahan yihiin.
Guud ahaan mid kasta oo ka mid ah midabada isku midka ah waxaa loo isticmaali karaa adeegsiyo badan. Tusaale ahaan, codadka qabow ayaa ku habboon meelaha aad rabto inaad ku nasato, kuwaas oo deggan oo deggan.
Deegaanno badan oo firfircoon iyo meesha tamarta looga baahan yahay waa inaad isticmaashaa midabbo analoog oo xoog badan.
Si wax ku ool ah:
Midabyo sida buluug, huruud ah ... Waxay u adeegaan inay is dejiyaan oo is dejiyaan.
Midabada sida gaduudka, huruudda ah ... Waxay ku habboon yihiin joogitaanno tamar badan leh.
Dabcan, marka loo baahdo isbarbar -dhig weyn, waxaa lagama maarmaan ah in la aado midabo dhammaystiran, kuwaas oo bixiya ciyaar iyo natiijooyin ka wanaagsan kuwan.
Markaad ogaato midabada u dhiganta, waxa xiga ee aan u baahannahay inaan sameyno ayaa ku siin doona tusaalooyin ah midabada ay yihiin. Dhab ahaantii, waxaa jira saddex lammaane oo ah midabyo isbarbar socda, sida ay yihiin:
Casaan iyo cagaar.
Jaalle iyo guduud.
Buluug iyo oranji.
Xaaladdan oo kale, waxaad leedahay kuwan soo socda:
Jaale leh huruud cagaar ah iyo oranji huruud ah.
Orange leh jaalle huruud ah iyo oranji-cas.
Casaan leh oranji guduudan iyo buluug cas.
Violet oo leh midab casaan leh oo buluug ah.
Buluug leh buluug huruud ah iyo shaah.
Cagaar leh buluug-cagaar iyo cagaar-jaalle ah.
Dhismaha kuwani waxay ku saleysan yihiin wareegga chromatic -ka si, haddii aad doorato midab, waa inaad ku dartaa tii hore iyo tan isla markiiba ka dib.
Sidaad arki karto, midabada is -midka ah waxaa loo adeegsan karaa waxyaabo badan, laga bilaabo qurxinta qolalka, guryaha, xafiisyada, iwm. xitaa naqshadeynta webka, astaamaha si fiican u koraya, sawirro, sawirro, iwm.
Ma taqaan wax badan oo ku saabsan hooskaan? Ma nala wadaagtaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Waraaqaha midabaynta » Midabada analogga ah
Sida loo sameeyo collage ee Photoshop
Sida loo sameeyo Reel barta Instagram